DABAGALKA WARKA: Puntland & Jarmalka Yaa run ka sheegaya Mashruuca dhismaha Wadada Garoowe iyo Gaalkacyo, Maxaase xaqiiqo ah? – Puntlandtimes
DABAGALKA WARKA: Puntland & Jarmalka Yaa run ka sheegaya Mashruuca dhismaha Wadada Garoowe iyo Gaalkacyo, Maxaase xaqiiqo ah?
GAROOWE(P-TIMES) – Dawladda Jarmalka oo ah deeq-bixiyaha Hantida dib loogu dayactiri lahaa wadada isku xirta Garoowe & Gaalkacyo, waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay joojisay Mashruucaas, waxay ku eedeysay in la musuqmaasuqay oo sidii loogu talo-galay waxba looga qaban waayay. Taas waxay soo shaac-baxday todobaadkan waxaana mudo dheer hakad ku jiray arrimaha Mashruuca.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuu kal hore safar ugu aaday Nairobi, sidii xal loogu heli lahaa muran ka taagnaa dhismaha wadadan, balse guuldarro ayaa la sheegay in ay wafdigas lasoo laabteen, markii arrimihii laga wada hadlay laysku afgaran waayay.
GIZ oo ah Hay’ad laga leeyahay Jarmalka oo mashruucan korjoogto iyo qaabeyntiisaba lahayd, waxay marar badan la xaqiijiyey in ay cabasho ka gudbisay hanaanka maamul ama shaqo wadaag ee Hay’adda PHA oo Puntland u qaabilsan arrimaha Wadooyinka, taas oo isku arkaysay awooda koowaad.
Dawladda Puntland 11 September 2018, waxay ku dhawaaqday in uusan joogsan mashruuca Wadada Garoowe & Gaalkacyo, lana dhameystirayo waqtigii loogu talo-galay, lama shaacin waqtigaas xiliga uu yahay, balse Jarmalku waxay sheegeen in mashruucaas uu dhintay oo lacagtiisii loo weecinayo mashaariic kale.
Berrito wasiiro iyo xubno katirsan Puntland ayaa tagaya halka ay shaqadu ka socotay, waxay la kulmayaan Shirkada Isxilqaan oo horey loo siiyey dhismaha Mashruucan, laakiin ay eedo badan dul-hoganayaan, laftirkeeduna sheeganaysa in ay dhibane u tahay arrimaha Mashruucan oo dhan.
Shacabku waxay ilgaar ah ku hayaan arrimaha socda, waxaana Wakiilada baarlamaanka Puntland ee waqtigoodii ugu dambeeyey kusoo qaaday mashruucan ayaa lagu dhaliilayaa in aysan qaadan doorkii looga baahnaa, Xildhibaanada ka soo jeeda gobalka Mudug ayey arrintan u tahay in lagu ciqaano ee markale damaca siyasadeed ku jiro.
Dadka sidda hoose ula socday mashruucan ayaa ku eedeynaya dawladda Puntland in ay lumisay fursad muhiim ah, oo ahayd markii ugu horeysay ee Jarmalku uu deeq caalami ah oo heerkaas le’eg la wadaago Soomaaliya, Puntland-na ay isku mar deeqdan wada heleen Somaliland iyo dawladda Faderaalka, labadanana ilaa hadda qeylo kama soo yeerin dawladda Jarmalka.
Shaki ma saarna in arrimo badan isi-saaran yihiin, balse welwelka taagan ayaa ah in dhaqaalahaas si kale loogu leexiyo goobo aan ku habooneyn, iyadoo ay Jarmalku balanqaaday in aan marnaba Puntland laga weecin doonin dhaqaalaha oo wax kale lagu qaban doono, Halka Musharaxiintu ay codsadeen in dhaqaalahaas la hakiyo oo aan wadada laga leexin.
Wixii khaldama GAAS baa leh, barlamaan mudug kasoo jeeda iyo midaan kasoo jeedinba GAAS waxba kama yeeleen. Hada waa inuu soo xiraa oo cadaalada hor keenaa dadkii waxaas sameeyay.
Asc. Wixii qaldamay waa in lagala xisaabtamaa dowladda puntland waxaana masuuliyadda la xisaabtanka laga rabaa baarlamaanka . Haddij taa lawaayana waa in shacabku la xisaabtamaa
Af wax cunay xishood.
BAARLAMAANKA WAA LA HAYSTAYAAL JEEBKA FULINTA KU JIRA(XUKUUMADDA),WAANA HALKA WAX KA KHALDAN YIHIIN.
GERMENY IYO DAALIMIINTAAN KA RUN SHEEGAYAA WAA CADAHAY.